Fumana umsebenzi: IDenmark ixelela abafuduki ukuba basebenzele izibonelelo zentlalontle
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseDenmark zokuPhula » Fumana umsebenzi: IDenmark ixelela abafuduki ukuba basebenzele izibonelelo zentlalontle
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • ulwaphulo-mthetho • inkcubeko • Iindaba zaseDenmark zokuPhula • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Urhulumente waseDenmark uthi abafazi abathandathu kwabali-10 abasuka eTurkey, eMntla Afrika naseMbindi Mpuma abaqeshwanga.
Abafuduki baya kucelwa ukuba bafumane imisebenzi ukuze bafumane izibonelelo eDenmark.
Imithetho emitsha iya kunceda abafuduki ukuba bazimilisele kuluntu lwaseDenmark.
Abasetyhini abathandathu kwabalishumi 'abangasentshona' abafudukayo eDenmark abaqeshwanga.
Abafuduki baseDenmark baya kucelwa ukuba basebenze ubuncinci iiyure ezingama-37 ngeveki ukuze babenakho ukufumana izibonelelo zentlalontle ezikhutshwe ngurhulumente.
Inkulumbuso yaseDenmark uMette Frederiksen
Izithintelo ezitsha ziya kunyanzeliswa kwabo bebefumana izibonelelo zentlalontle kurhulumente waseDenmark kangangeminyaka emithathu ukuya kwemine, kodwa abangakhange bafikelele kwinqanaba elithile lobungcali kwiDanish.
"Kwiminyaka emininzi besenza into engafunekiyo kubantu abaninzi ngokungafuni kwanto kubo," yatsho iNkulumbuso, eyongeze ukuba le mithetho yayijolise ikakhulu kubafazi abafudukayo abahlala kwezi zibonelelo, ababengasebenzi kwaye ukusuka kwimvelaphi 'engeyoyasentshona'.
"Kuyingxaki xa sinoqoqosho olomeleleyo, apho abantu beshishini bafuna abasebenzi, ukuze sibe neqela elikhulu, ikakhulu abasetyhini abaneemvelaphi ezingezizo ezaseNtshona, ezingeyonxalenye yentengiso yezabasebenzi," utshilo uFrederiksen.
Dominikha Unesinye sezona meko zinzima ekufudukeni ngaphakathi European Union (EU).
NgoJuni, wapasisa umthetho ngevoti engama-70 ukuya kwengama-24, evumela ukuba bagxothe abafuna indawo yokhuseleko kwaye baqhubekise izicelo ngelixa bengaphandle kwelizwe.